Mizollen (မီဇိုလန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Mizollen (မီဇိုလန်)
Mizollen (မီဇိုလန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Mizollen (မီဇိုလန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Mizollen (မီဇိုလန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Mizollen® (mizolastine) ကိုHistamine ဓါတ်ကို ဆန့်ကျင်သော ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ရာသီအလိုက် နှာစေးခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် နှာချေခြင်း၊ မျက်လုံးနှာခေါင်းတို့နှင့် ဆိုင်သော အခြားဓါတ်မတည့်ခြင်းများကို ပျောက်ကင်းရန်သုံးပါသည်။
Mizollen (မီဇိုလန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Mizollen® (mizolastine) ကို ပုံမှန်အားဖြင့် တနေ့တကြိမ် ရေများများဖြင့် သောက်ပါ။
ဆေးအာနိသင်ကို အထိရောက်ဆုံးရရှိစေရန် ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်းမှန်မှန်သောက်ပါ။
ဆေးသောက်သည့် အချိန်ကို တနေ့နှင့် တနေ့တူအောင်ထားပါ။
ဆေးအာနိသင်ရရှိရန် ၁ နာရီခန့်ကြာပါသည်။
ဆေးကို အစာနှင့်တွဲပြီးသော်လည်းကောင်း၊ အစာအစားပြီး လျှင်သော်လည်းကောင်း သောက်နိုင်သည်။
Mizollen (မီဇိုလန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Mizollen® (mizolastine) ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Mizollen® (mizolastine) ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Mizollen® (mizolastine) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Mizollen® (mizolastine) ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Mizollen® (mizolastine) ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Mizollen (မီဇိုလန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Mizollen (မီဇိုလန်)သည် အချို့သောသူများတွင် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်နှင့် အငန်ဓါတ်များပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးသောက်နေစဉ်တွင် သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကို လိုအပ်သော သွေးစစ်မှုများပြုလုပ်ကာ သင့်ကျန်းမာရေး ကို စောင့်ကြည့် နေပါလိမ့်မည်။
Mizollen (မီဇိုလန်)သည် ထိုင်းမှိုင်းတတ်သော ဆေးမျိုးမဟုတ်ဟုဆိုသော်လည်း အချို့သော သူများသည် ဆေးသောက်ပြီး လျှင် အနည်းငယ် ထိုင်းမှိုင်းခြင်းကို ခံစားရတတ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Mizollen (မီဇိုလန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Mizollen (မီဇိုလန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Mizollen® (mizolastine) ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့မှာ
အစားအသောက်ကောင်းပြီး ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
အောက်ပါပြင်းထန်လက္ခဏာများ ခံစားရပါက သင့်ဆရာဝန်အားချက်ချင်းပြသရန် လိုအပ်သည်။
အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ အသက်ရှုလျှင် အသံများမြည်ခြင်း
ရင်ထဲတွင် တလှပ်လှပ်ဖြစ်ခြင်း (နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ မြန်ခြင်း)
ဘယ်ဆေးတွေက Mizollen (မီဇိုလန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Mizollen® (mizolastine) ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အောက်ပါဆေးများသည် Mizollen® နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများဖြစ်သည်။
Macrolideအမျိုးအစားပိုးသတ်ဆေးများ (erythromycin,clarithromycin, azithromycin
Imidazoleအမျိုးအစား မှိုသတ်ဆေးများ(ketoconazole, fluconazole, itraconazole)
Nifedipine (သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါများတွင် သုံးသောဆေး)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Mizollen (မီဇိုလန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Mizollen® (mizolastine) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Mizollen (မီဇိုလန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Mizollen® (mizolastine) ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Mizollen (မီဇိုလန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 10 mg နေ့စဉ်သောက်နိုင်သည်။ သို့သော် ဆေး၏ ပြင်းထန်သော ဆိုးကျိုးများမခံစားရအောင် သင့်ဆရာဝန်က သတ်မှတ်ထားသောပမာဏထက်ကျော်လွန်ပြီး မသောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Mizollen (မီဇိုလန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Mizollen (မီဇိုလန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Mizollen® (mizolastine) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Mizollen® (mizolastine) သောက်ဆေးပြား 10mg
Mizollen® (mizolastine) သောက်ဆေးပြား၊ ကြာရှည်အာနိသင်ပေးသော ဆေးပြား 10mg
Mizollen® (mizolastine) ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Mizollen® Drug Information. http://www.catalog.md/drugs/Mizollen.html. Accessed December 1st, 2016
Elina (Mizolastine). https://www.unitedpharmacies.com/Elina-Mizolastine.html. Accessed December 1st, 2016
Elina (Mizolastine) - 10mg (15 Tablets).
Accessed December 1st, 2016.